admin မှ 22-03-19 ရက်နေ့တွင်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တခါသုံး မြင့်မားသော 100% ချည်သား မြုံသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဖိသိပ်ထားသော ပိတ်ပါးလွှာ သည် သဘာဝ ပျော့ပျောင်းသည်။
သင့်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ကတိအချို့ရှိသည်- (1) ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းလူကို Skype၊ QQ စသည်ဖြင့် အမြဲအွန်လိုင်းပေါ်နေပါသည်။ ဖောက်သည်များ၏ ပြဿနာများကို အချိန်မီဖြေရှင်းနိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းဝန်ထမ်းသည် ဖောက်သည်များ၏ မေးခွန်းများနှင့် အီးမေးလ်များကို အတွင်းတွင် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
Medical Caps bule clip စျေးစက်မှုလုပ်ငန်းဆံပင်ပိုက်ထုပ်
ချစ်စရာအသွင်အပြင်နဲ့ ဝတ်ရလွယ်ကူတဲ့ ဦးထုပ်မျိုးတွေအတွက် ပိုစျေးကောင်းတယ်။ဤဦးထုပ်ကိုစက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ အများဆုံးအလေးချိန် 10gsm ရှိနိုင်သည်။ဤအသက်ရှူနိုင်သော၊ မီးမလောင်နိုင်သော ဦးထုပ်သည် တစ်နေ့တာလုံးအတွက် ချွေတာသောအတားအဆီးတစ်ခု ပေးဆောင်သည်။၎င်းတွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ ချိန်ညှိနိုင်သော sizi အတွက် elastic band တစ်ခုပါရှိသည်။
တစ်ခါသုံး အကာအကွယ် ခွဲစိတ်မှုမျက်နှာဖုံးများသည် Covid ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို လျှော့ချရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ပလတ်စတစ်နှာခေါင်းဘားနှင့် နှာခေါင်းညှပ်များအားလုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မတူညီသောမျက်နှာအမျိုးအစားအလိုက် သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးချိန်ညှိနိုင်သည်။အတွင်းဖုံး ultrasonic အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်ခြင်းကို ရွေးချယ်ထားပြီး နားခါးပတ်သည် အလွန်ခိုင်ခံ့၍ မလွယ်ကူနိုင်ပါ။
Medcial Face Mask Disposable Mask Nonwoven Disposable Medcial Face Mask3ply Earloop
Nonwoven တခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး 3ply နားကွင်းကို တစ်ကိုယ်ရေ အကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် အကြံပြုထားသည်။၎င်းကို ယက်မဟုတ်သော၊ အစက်အပြောက် ဂဟေဆက်ခြင်း၊ နားကွင်းဒီဇိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပျော့ပြောင်းနိုင်သော နှာခေါင်းဝိုင်ယာ၊ စေးနှင့် ဖိုက်ဘာမှန်များ အခမဲ့ဖြစ်သည်။.ပုံစံ- ၃လွှာ၊ နားကွင်း ထုပ်ပိုးမှု- @50pcs/ပုံး၊ 20...
Medical Gauze စျေးကွက်အရွယ်အစား၊ နယ်ပယ်၊ ကြီးထွားမှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
1. ပိုးမွှားကင်းစင်သော သို့မဟုတ် ပိုးမွှားထုပ်ပိုးခြင်း 2. ချည်သား- 40's၊ 32's၊ 21's 3. X-ray ချည်ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ၊ ခေါက် သို့မဟုတ် ခေါက်ထားသော အစွန်း 4. Mesh- 20x12၊ 19x15, 24x20, 4, 26x18, 328x20 အရွယ်အစား- 5cmx5cm(2"x2"),7.5cmx7.5cm(3"x3"),10cmx10cm(4"x4"),10cmx20cm(4"x8"), သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်...
ဒဏ်ရာစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပတ်တီးစက် Roll Gauze Bandage
ဖော်ပြချက် 1. ပျော့ပျောင်းသော၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော။2. အလင်းချုံ့ပေးခြင်း၊ သင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။3. တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပေါင်းစည်းမှု။4. အဆက်မပြတ် တင်းမာမှု သက်သာစေခြင်း။5. ဆန့်နိုင်အားကောင်းမွန်သော ညွှန်ပြချက်များ 1. ပိုးနှင့်ညောင်းနာများအတွက် ပတ်တီးများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း။2. Fixing b...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Cotton Swabs
SHAOHU@ ဝါဂွမ်းတံသည် သစ်သားချောင်း၊ ဝါးချောင်း၊ စက္ကူချောင်း၊ ပလပ်စတစ်ချောင်းစသည်ဖြင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်စရာ အမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အဆိုပါသစ်သားချောင်းကို သဘာဝသစ်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သဘာဝပစ္စည်းများမှ ပြုလုပ်ထားသည်။အသုံးပြုရာတွင် ဘေးကင်းပြီး ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေဘဲ ဇီဝရုပ်ကြွင်းကို ဖျက်နိုင်သည်...
တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask, မျက်နှာကဲ့သို့ Mask, မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းများ, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ,